कोकमा विषाक्त रसायन: क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्मको मुख्य कारक - Science Dialog
अब विस्तारै जाडोयाम सकिएर गर्मीयाम शुरु हुँदैछ । पृथ्वी सूर्यको नजिक जाँदैछ र दिन लामा हुँदैछन् । गर्मीयाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका चिसा पेयपदार्थ पिउने कुलत नेपालीमा पनि परिसकेको छ । तर, गर्मी छल्न भन्दै हामीले पिउने कोकाकोला र फेन्टा जस्ता पेयपदार्थ स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक भएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
नेपालमा कोकाकोला र फेन्टा, स्प्राइट लगायतका नाममा ‘गुलियो विष’ मा बेचिँदै आएको छ र ती पेय पदार्थमा एक त बेलाबेलामा अखाद्य वस्तु फेला परिरहन्छन् । केही समयअघि मात्र पनि काठमाडौंको बौद्धमा सुरेस बज्राचार्यको कोल्ड स्टोरमा कोकाकोलाको बोतलमा लेदो भेटिएको थियो । कोकाकोलामा पत्तीका टुक्रा, आलपिन, लेदो भेटिएका खबर पत्रिकामा बारम्बार पढ्न पाइन्छ ।
विज्ञहरू भन्छन्, कोकाकोला आफैंमा मन्द विष हो । भारतमा बाबा रामदेवले कोकाकोलालाई ‘ट्वाइलेट क्लिनर’ को संज्ञा दिदै त्यस्ता पेयपदार्थ नपिउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । उनको सल्लाह छ, “गर्मीमा कागती, नीम र बेलको सर्वत पिउनुस् । फलफूलको फ्रेस जुस पिउनुस् । दही र मही पिउनुस् । तर कोकाकोला पटक्कै नपिउनुस् ।” बाबा रामदेवले कोकाकोलामा हुने हानिकारक रसायनका कारण मानिसलाई क्यान्सरदेखि अल्सरसम्मका रोग लाग्ने विवरण नै दिएका थिए ।
भारत र नेपालका ठूला मिडियाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रहरलाग्दो विज्ञापनको लोभमा कोकाकोला र फेन्टाको हानिकारक पक्षबारे जनचेतना जगाउने खालका सामग्री दिंदैनन् । विश्वका धेरै अनुसन्धाताले कोकाकोलाका बारेमा नकारात्मक रिपोर्ट दिएका छन् ।
केही वर्षअघि हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थको अनुसन्धानबाट कोकाकोलाले मोटोपन बढाउने मात्र हैन, त्यो जीवनकै दुश्मन भएको पत्ता लागेको थियो । कोकाकोला जस्ता गुलिया हल्का पेयपदार्थ पिएकै कारण वर्षमा विश्वभर करीब पौने दुई लाख (१ लाख ८० हजार) मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । कोक पिएकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष एक लाख तेत्तीस हजार मानिस मधुमेहको शिकार हुने गरेका छन् भने हरेक वर्ष ६ हजार मानिस क्यान्सरको शिकार हुने गरेका छन् । यसैगरी कोक जस्ता पदार्थ पिएकै कारण करीब ४४ हजार मानिस मुटुको रोगी भएर मर्ने गरेका छन् । सन् २०१३ को १९ मार्चमा डेली मेल युकेको रिपोर्ट अनुसार यो तथ्यांक अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित संस्था ‘इन्ष्टिच्यूट फर हेल्थ म्याट्रिक्स एण्ड इभोलुशन ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज् स्टडिज’ ले सन् २०१० मा भारतमा गरेको अनुसन्धानपछि के पाइयो भने भारतमा त्यस वर्ष ९५ हजार ४२७ जनाको मृत्युको एउटा ठूलो कारण कोकाकोला र फेन्टा जस्ता हल्का पेय नै रहेछ । त्यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या सन् १९९० को तुलनामा २० वर्षमा १६१ प्रतिशतले बढेको रहेछ । सो रिपोर्टका अनुसार भारतमा कोकाकोला पिउनेहरूमध्ये ७८ हजार १७ जना मानिस मुटुको बिमारबाट मरे । ११ हजार ३१४ मानिस मधुमेहका कारण मरे ।
भारतको अर्को उदाहरण लिऊँ । छत्तीसगढस्थित दुर्ग, राजनन्दन गाउँ र धमतारी जिल्लाका किसानका अनुसार उनीहरूले आफ्नो धान खेतलाई कीटनाशकबाट बचाउन कोक र फेन्टाको प्रयोग गरेका थिए र त्यो सफल भएको थियो । पानीमा कोक र फेन्टा मिलाएर धान बालीमा छर्किनु कीटनाशकको प्रयोगभन्दा धेरै सस्तो र प्रभावकारी भएको किसानहरूको अनुभवबारे सन् २००४ को ३ नोभेम्बरमा बीबीसी न्यूजले नै समाचार प्रसारण गरेको थियो ।
कोक र फेन्टा जस्ता कार्बोनेटेड पेयपदार्थबाट डाइबिटिज, हाइपरटेन्सन र पेटमा पत्थरी हुने संभावना अत्यधिक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । दिनमा दुई वा त्यसभन्दा बढी कोक पिउँदा क्रोनिक किड्नी रोग हुने खतरा बढ्न सक्ने उनीहरूको सल्लाह छ । अमेरिकी चिकित्सा अनुसन्धान पत्रिकामा सन् २००८ को जुलाई १८ मा प्रकाशित खबर अनुसार कोकाकोलामा फस्फोरिक एसिड बढी हुन्छ, जसले हाम्रो मूत्र प्रणालीमा असर पारी मिर्गौलामा समेत पत्थरीको कारण बन्न सक्छ ।
विश्वको चर्चित पत्रिका ‘डेली एक्सप्रेस’ का अनुसार जो मानिस हरेक दिन कोकाकोला पिउँछन्, उनीहरूलाई मुटु या नसाको रोग हुने खतरा ४३ प्रतिशत हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनका दौरान के पाए भने कोकाकोला नपिउनेहरूमा हृदयघातको खतरा कम देखिएको थियो । अझ अर्को रोचक तथ्य त के पाइयो भने कोकाकोला पिउनेहरूको प्रजनन् क्षमता समेत कमजोर हुन्छ ।
एउटा प्रयोग गरौं
कोक कति घातक हुन्छ भन्नेबारेमा तपाईं हामी एउटा प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौं । कोकको बोतलमा अलिकति दूध मिसाउनुस् । त्यसलाई दुई तीन घन्टा त्यसै छाडिदिनुस् । त्यसपछि तपाईं देख्नुहुनेछ, बोतलको तल्लो सतहमा सेतो फोहोरजस्तो चिज जम्मा भइरहेको हुनेछ । अनि माथितर्फ हल्का रंगको पेय पदार्थ देख्नुहुनेछ । त्यस्तो किन हुन्छ भने कोकमा रहेको फस्फोरिक एसिडले दूधको क्याल्सियमलाई बाहिर निकालिदिन्छ । यदि यही कोक पिउने हो भने त्यसले हाम्रो हाडमा रहेको क्याल्सियमलाई पनि त्यसैगरी बाहिर निकाल्ने भयो । यसरी शरीरबाट क्याल्सियम बाहिर निस्कन थाल्यो भने तपाईंको हाड के होला ? खासगरी ती बच्चाहरू जो हुर्किंदो उमेरका छन् र जसलाई अग्लो हुन र शरीरको पुष्टिका लागि क्याल्सियमको अत्यधिक खाँचो छ, उनीहरू कोकको कुलतमा लाग्दा शरीरमा भएको क्याल्सियम पनि समाप्त हुन जान्छ । अनि उनीहरू रुग्ण, रोगी र कमजोर हुन्छन् ।
बन्द गरौं बिक्री
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमा यसरी नयाँ पुस्तालाई रोगी बनाइरहँदा राज्य भने मौन छ । अनि ठूला मिडियालाई विज्ञापनको हाड फालिएको छ, उनीहरू पनि मौन छन् । अब अति भैसक्यो, यस्ता पेयपदार्थको विरुद्धमा सामाजिक जागरणसँगै सरकारले पनि ठोस निर्णय गर्र्नैै पर्छ । नेपालमा बोटलर्स नेपालमाथि सरकारी लगाम जरुरी छ । कमसे कम स्कूल र कलेजका क्यान्टिनमा कोक बेच्न नपाइने नियम बनाइनुपर्छ । अनि स्वास्थ्य संवाहकहरूले पनि बाबा रामदेवले झैं चेतना जगाउनुपर्छ ।
कोकाकोला मन्द विष भएको थाहा पाएपछि भारतका महानायक अमिताभ बच्चनले कोकाकोला जस्ता हल्का पेयको विज्ञापनमा मोडलिङ गर्न बन्द गरेको अहमदावादमा आयोजित एक कार्यक्रममा घोषणा गरिसकेका छन् । “मलाई जयपुरमा एक फुच्ची छात्राले सोधिन्, ‘जुन पेय पदार्थलाई मेरो गुरुले विष भन्नुभएको छ, त्यसको विज्ञापनमा तपाईं किन खेल्नुहन्छ ?’ मसँग उनलाई दिने कुनै जवाफ थिएन । त्यसपछि मैले त्यस्ता पेयपदार्थको विज्ञापनमा खेल्न छाडिदिएँ ।”
भारत लोकसभाको क्यान्टिनमा कोकाकोलामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर नेपाल र भारतलगायत तेस्रो विश्वका स्कूल र कलेजका क्यान्टिनमा कोक र फेन्टा मजाले बिक्री भइरहेको छ । भर्खरका युवाहरू कोकको कुलतमा लागेका छन् । कुनै पार्टीमा जाँदा चार–पाँच ग्लास कोक पिउन उनीहरू पछि पर्दैनन् । यसरी स्कूले उमेरदेखि नै नेपालको उर्वर युवा शक्ति मन्द विषको चपेटामा परिरहँदा राज्य उदासीन हुनु बिडम्बना हो ।
कोकाकोलाबारे बाबा रामदेवको भिडियो लिंक
Next story स्मार्टफोन हरायो, चोरी भयो ? ‘किल बटन’ थिच्नुहोस् आफै पत्ता लाग्छ !
Previous story कृषि उपजको मूल्य अब एसएमएसबाटै